Dhaabbileen 124 nagahee seeran alaa komishiniin daldaltootaf dhiyeessu-Ministeera galiiwwanii – Fana Broadcasting Corporate
Dhaabbileen 124 nagahee seeran alaa komishiniin daldaltootaf dhiyeessu-Ministeera galiiwwanii
Finfinnee, Onkololeessa 30,2011(FBC)-Dhaabbileen 124 nagahee seeran alaa komishiniin daldaltootaf dhiyeessaa jiraachuu Ministeerri Galiiwwanii beeksiise.
Deettan Ministerichaa Damee seera Kabachiisaa obbo Zamadee Tafarraa ibsa kennaniin,daldalaan seera qabeessi dhaabbilee seeran alaa124 irraa bittaa kamiiyyuu raawwachuu akka hin qabaanne hubachiisanii jiru.
Komishiniin daldalatootaa nagahee dhiyeessun hojii seeramaleessa raawwatameen bittaan Birrii biliyoona 4 olii kan raawwatamefi gochichi haala yaaddessaa irra gahuu ibsaniiru.
Bittaa meeshaa malee nagahee qofa komishiniin dhaabbileen dhiyeessan jiraachuu qorannoon Ministeerichi raawwate mirkaneessee jira.
Komishiniin nagahee kanneen dhiyeessan waraqaa eenyummaa sobaa,eeyyama daldalaa fi teessoo kan qaban yoo ta’u,kuusaa ragaa Ministeerichaa keessatti kan hin galmoofneefi lakkoofs kaffaltii gibiraa sirrii kan hin qabaanne ta’uu ibsaniiru.
Ji’oottan 4 darbanitti dhaabbilee 563 irratti odiitii taasifameen nagahee seeran alaan wal qabatee kufaa ta’uu obbo Zamadeen himaniiru.
Dhiyeessitootni nagahee seeran alaa harkaa fi harkatti qabamee qorannoo irratti gaggeeffamaa jiraachuu eerundhaabbilee qaamota kana waliin hojjetan irratti sakattaa’iinsi taasifamaa jira jedhaniiru.
Waldaalee meeshaalee liqiidhan fudhatanii, kaffaltii ofirraa xumuraniif waraqaan…
Traaybaas Bariich Teek har’a oomishasaa erguu ni eegala
Miseensonni boordii trast fandii diyaaspooraa ifooman
Daandiin Qilleensaa Ityoophiyaa Gaanaa keessatti tajaajila balalii laachuu eegaluufi